Ma run baa? - King County
Helitaanka talaalka degmada King County Talaalka dhalinyarada Hubinta xaqiiqada
Ma run baa?
Hubinta xaqiiqada tallaalka COVID-19
Way fududahay inaad la kulanto macluumaad qaldan oo ku saabsan badbaadada tallaalka coronavirus. Qaar ka mid ah wararka khaldan ee ku wareegaya khadka tooska ah iyo ereyga afka ayaa deggan. Way adkaan kartaa in la ogaado waxa la aaminsan yahay, sidaa darteed waxaan u abuurnay boggan inaan ka caawino fahamka xaqiiqooyinka.
Tallaalada iyo Jirkaaga
Tallaalada iyo Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Tallaalada iyo Cunsuriyadda Habaysan
XAQIIQ: Ma jiraan wax ku jira tallaallada kaa dhigi kara magnetic.
Macluumaad khaldan: Fiidiyowyada fiidiyoowga ah ayaa si been ah u sheegay in tallaallada ay kaa dhigi karaan waxyaabo magnetic ah.
Xaqiiqda: Tallaallada COVID-19 kuma siin karaan sifooyin magnet, oo ay ku jiraan goobta tallaalka (gacantaada).
Ka eeg liistada dhammaystiran ee ka kooban tallaallada COVID-19 boggeena Su'aalaha la Weydiiyo: Tallaalka COVID-19 FAQ - Degmada King.
XAQIIQ: Tallaallada COVID-19 MA beddeli doonaan hiddo-wadahaaga amaDNA gaaga.
Macluumaad khaldan: Waxaa jirta cabsi ah in tallaalku wax ka beddeli karo DNA-da dadka oo uu beddeli karo shakhsiyaddooda ama u beddeli karo jiilka soo socda ee qoyska.
Xaqiiqda: Labada tallaal ee Moderna iyo Pfizer waxay adeegsadaan fariin RNA (ama mRNA). mRNA waxay baraysaa jirkeena in ay inaga ilaaliso iyadoo sameysa unugyada difaaca jirka iyo unugyada kale ee la dagaalanka infekshinka.
MRNA da laga helo tallaalka COVID-19 waligiis ma galayo xudunta unugga - halkaasoo lagu keydiyo DNA-gayaga. Tan macnaheedu waxa weeye mRNA wax saameyn ah kuma yeelan karto DNA-deena. Marka mRNA ay dhammeyso barashada unugyadeena, enzymes-ka ayaa burburiya mRNA sidaa darteed kuma sii jiraan jidhkeena.
XAQIIQ: Talaalka COVID-19 kuma qaadasiin doona fayraska Corona.
Macluumaad khaldan: Waxaa jiray macluumaad khaldan oo sheegaya in tallaalada COVID-19 ay ku siin karaan COVID-19.
Xaqiiqo: Kuma jiraan talaalka Covid-19 wax coronavirus ah. Kama qaadi kartid talaalka fayrus.
Talaalku wuxuu barayaa unugyada jirkeena inay sameeyaan borotiin u eg sida midka laga helay dusha sare ee fayraska COVID-19. Si loo bixiyo tilmaamaha, tallaalku wuxuu isticmaalaa farriin RNA (mRNA) ama fayras qabow oo caadi ah oo aan waxyeello lahayn oo loo beddelay si uusan cudur u keeni karin. Jidhkeenu wuxuu bartaa inuu aqoonsado borotiinkaas si ay kor ugu qaadaan jawaab celinta difaaca jirka haddii fayraska COVID-19 uu soo galo jirka.
XAQIIQDA: Tallaallada COVID-19 waxay sababi karaan calaamado hargab oo kale u eg, laakiin falcelinnada xad dhaafka ahi aad ayey u yar yihiin.
Macluumaad khaldan: Waxaa jiray macluumaad khaldan oo sheegaya in tallaalku inta badan keeno falcelin xasaasiyadeed oo rabshad leh, oo loo yaqaan anaphylaxis, taasoo dad badan si daran ugu xanuunsata.
Runta: Waa macquul inaad la kulanto waxyeelooyin sida madax xanuun, cudud xanuun, daal ama yeelato qandho maalin ama laba ka dib marka lagaa tallaalo. Laakiin saameyntani ma sii raagto waana calaamado muujinaya in tallaalku shaqeynayo.
Dareen-celinta xasaasiyadda daran (anaphylaxis) waa dhif iyo naadir, laakiin way ku dhici kartaa, gaar ahaan dadka horayba u lahaa xaalad xasaasiyad daran. Dhammaantood waa la daaweyn karaa.
Illaalada ayaa ku jirta, haddiiba ay dhacdo. Markaad is tallaasho ka dib, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku sugto xarunta caafimaadka 15 daqiiqo si loo hubiyo inaadan ku yeelan xasaasiyad daran tallaalka.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay qiyaasta tallaalka ugu horreeya, ma ahan inaad hesho tan labaad. Macluumaad farsamo oo dheeri ah oo ku saabsan talaalka, arag tan CDC guidance.
XAQIIQ: Tallaallada COVID-19 kuma jiraan jajabyada raadraaca, unugyada uurjiifka, alaabada doofaarka, biraha waxyeellada leh ama waxyaabaha sunta u keeni kara.
Macluumaad khaldan: Internetka waxaa ka buuxa sheegashooyin been ah oo ku saabsan waxa ku jira tallaalka
Xaqiiqada: Maaddada muhiimka ah ee labada tallaal ee Pfizer iyo Moderna waa maaddo hidde ahaan loo yaqaan mRNA. Tallaallada sidoo kale waxaa ku jira xayr, cusbo, aashitada loo yaqaano acetic acid (waxa ugu muhiimsan ee ku jira waa khal), iyo sonkor Tallaalka Johnson & Johnson (J&J), maaddada muhiimka ah waa fayras caadi ah oo qabow, laakiin wax laga beddelay si uusan cudur u keeni karin. Tallaalka J&J sidoo kale waxaa ku jira xasiliyayaal (cusbo, aalkolo, polysorbate 80, hydrochloric acid) iyo amino acids.
Tallaalladaani waxay leeyihiin maaddooyin celceliska ahaan kiishka baradhada ka yar!
XAQIIQ: Adoo joojinaya aafada sida ugu dhaqsiyaha badan, talaalada COVID-19 ayaa qof walba caawin doona. Tallaalku wuxuu yareyn doonaa isbitaal dhigidda iyo dhimashada dadka ku jira kooxaha halista sare leh, oo ay ku jiraan bulshooyinka midabbada leh ee si aan habboonayn u saameeyay cudurka faafa.
Macluumaad khaldan: Marka la eego taariikhda iyo cunsuriyada nidaamsan ee socota ee daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka bulshada, dadku waxay qabaan tabashooyin sax ah oo ku saabsan sinnaanta la xiriirta horumarinta tallaalka iyo tallaalka, oo ay ku jiraan cidda ku jirtay ama aan ku jirin tijaabooyinka tallaalka. Su'aalo kala duwan ayaa ka soo ifbaxay in bulshooyinka la hayb sooco loo adeegsaday doofaarka guinea, ama taa bedelkeeda dadka Madoow, Latino, iyo Dadka Asaliga ah gebi ahaanba laga tagay tijaabooyinka tallaalka.
Runta: Kahor intaan lasoo saarin tallaalka COVID-19, dadka u dhaqdhaqaaqa iyo kuwa u dooda bullshada waxay muujiyeen walaac ku saabsan dhibaatada taariikheed iyo tan socota ee ay u gaysteen hay'adaha caafimaadka iyo kuwa dawliga ah dadka madow, kuwa asaliga ah, iyo dadka midabka leh. Dadaalkooda awgeed, tobanaan kun oo qof oo kaqeyb qaatay tijaabooyinka tallaalka COVID-19 ayaa ka tarjumaya kala duwanaanta dadkeena. Tallaalladu waxay yahiin kuwo waxtar leh oo ammaan u ah dhammaan kooxaha iyo jinsiyadaha kala duwan.
Intaa waxaa dheer, dadka midabka leh waxey ka qateen door muhiim ah ee hoggaamineed si loo soo saaro talaalka. Tusaale ahaan, Dr. Kizzmekia Corbett, oo ah saynisyahan madow, oo ka tirsan Machadka Qaranka ee Caafimaadka ayaa hogaaminayey baaritaanka talaalka coronavirus.
Bulshooyinka Madow, Dhaladka Mareykanka, Laatiinka, iyo Jasiiradaha Baasifigga ah waxay la kulmeen heerar aad u sarreeya oo isbitaal dhigid iyo dhimasho ka timaadda COVID-19 ee Gobolka King. Bulshooyinkan ayaa ka mid noqon doona kuwa sida aadka ah uga faa'iideysta in u tallaalku u noqdo ilaaliye